काँग्रेसको अग्रसरतामा मधेसको मुद्धा समाधान हुन्छ,<br> कौसर शाह (व्यवस्थापिका संसद सदस्य नेपाली काँग्रेस
Homerajnitiकाँग्रेसको अग्रसरतामा मधेसको मुद्धा समाधान हुन्छ,
कौसर शाह (व्यवस्थापिका संसद सदस्य नेपाली काँग्रेस
काँग्रेसको अग्रसरतामा मधेसको मुद्धा समाधान हुन्छ,
aparadhkhabar.com 6:00 PM
नेपाल विद्यार्थी सङ्घ पद्यकन्या क्याम्पसबाट नेविसङ्घको सहयोगीको रुपमा काम गर्नुभएकी कौसर शाह, २०५८ सालमा नेपाली काँग्रेसमा क्रियाशिल रुपमा लाग्नुभएको थियो ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाको नेपाली काँग्रेसको नगर सदस्य, काठमाडौँ क्षेत्र नं ६ को कोषाध्यक्ष, मुस्लिम सङ्घको केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुँदै २०६२÷०६३ मा नेपाली काँग्रेसबाट सक्रिय भएर चारपटक हिरासद, २०६२÷०६३ को आन्दोलनमा रिले अनसन, २०६३ को समानुपातिक उम्मेदवार बन्नुभएको थियो ।
दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन २०७० को निर्वाचनबाट नेपाली काँग्रेसको मुस्लिम कोटाबाट संविधान सभा सदस्य तथा व्यवस्थापिका संसद सदस्य हुनुभएको थियो । वर्तमान नेपालको समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा शाहसँग जनप्रहारले गरेको कुराकानीको सम्पादित अशं ।
अहिले के मा व्यस्त हुनुुहुन्छ ?
अहिले म संसदमा व्यस्त छु । सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रममाथि छलफल चलिरहेको छ । यो पुरा भएर बजेट आउने क्रममा छ त्यसैले फुर्सद कम छ ।
सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम कस्तो छ ?
अहिले आएको नीति तथा कार्यक्रम जनताको इच्छा आकांक्षाभन्दा धेरै माथिको आएको छ । जुन हिसाबको बजेट ल्याउने यो नीति कार्यक्रममा छ यो देश डुबाउने खालको छ यो व्यवहारमा आउलाजस्तो मलाई लाग्दैन । जनताले पनि यो कार्यक्रममाथि विश्वास गरेको देखिँदैन । यो नीति कार्यक्रमले सडक बालबालिकाको बारेमा समेटेको छैन । सडक बालबालिका पनि यो देशका भोलीका कर्णदार हुन् । एचआइभी एड्स, ड्रक्स न्यूनिकरणका लागि कुनै नीति बनेको छैन । एक घर एक रोजगार भनेका छन् तर कति उद्योग सञ्चालन गर्ने कुन कुन गर्ने स्पष्ट आएको छैन । देशमा थुप्रै उद्योगहरु अझैपनि बन्द छन् त्यस विषयमा पनि केही राखिएको छैन । शिखल सेमिनेरो थारुहरुलाई लाग्ने रोग यसको बारेमा पनि बोलेको छैन ।
तपाई नेपाली काँग्रेसको सांसद भएकाले यो नीति कार्यक्रमको विरोध गर्नुभएको त होइन ?
म नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट सांसद बनेको हो तर नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गर्दे छु त्यसकारण जनताको हितलाई ध्यानमा राखेर मुलुकको विकास निर्माणलाई ध्यानमा राखेर बोलेको हुँ । नीति कार्यक्रम बनाउनु ठूलो कुरा होइन त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु ठूलो कुरा हो ।
नेपाली काँग्रेस अहिले प्रतिपक्षमा छ कस्तो अनुभव गर्नुभएको छ ?
सरकारमा बस्नु नै ठूलो कुरा होइन । सरकार बाहिर नै बसेर जनताको लागि हामी काम गर्दे आएका थियौँ पहिलेपनि र अहिलेपनि गर्दै छौँ । कुनैपनि दल सरकारमा मात्र बसिरहने भन्ने हुँदैन । सरकारमा बसेर राम्रो काम गरेमात्र सरकारमा बसेको औचित्य हुन्छ तर यो सरकारले जनतालाई कुनै राहत दिन सकेको देखिँदैन । एउटा सानो कुरा कालोबजारी र भ्रष्टचार समेत रोक्न सकेको छैन । ग्याँसको अभाव अझैपनि जनतालाई छ । बाहिरबाट प्रशस्त आएपनि यहाँ कालाबजारीले पाइएको छैन ।
नेपाली काँग्रेस महाधिवेशनको दुई महिना वितिसक्दा पनि पदाधिकारी चयन भएको छैन त ?
तत्कालिन सभापति सुशील कोइरालाको निधनपनि नेपाली काँग्रेस शोकमा डुब्यो । शोककै घडिमा महाधिवेशन सम्पन्न भयो । महाधिवेशन सम्पन्न भएलगत्तै केन्द्रीय सदस्य थप्ने काम भयो । त्यसको लगत्तै संसदीय दलको निर्वाचन सम्पन्न भयो । सभापतिको विभिन्न कामले गर्दा केही दिन ढिला हुनु स्वभाविक हो । पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्री डा शशांक कोइराला केही समय बाहिर हुनुभयो । वरिष्ठ नेता आएपछि छलफल विस्तारै शुरु गरी चयन होला ।
नेपाली काँग्रेस गुठउपगुठले आक्रान्त छ नी ?
पार्टीको १३ औँ महाधिवेशनले गुठ र उपगुठको अन्त्य भएको छ । नेपाली काँग्रेभित्र कुनै पनि गुठ उपगुठ हुँदैन । ४०÷६० को भागवण्डापनि हुँदैन । नेपाली काँग्रेस पुरानो राजनीतिक पार्टी र हरेक आन्दोलनमा नेतृत्व लिएको पार्टी भएका नाताले पनि हामी एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ र मुलुकलाई निकास दिनुपर्छ ।
सरकार फेर्न गृहकार्यमा काँग्रेस लागेको थियो असफल भयो त ?
सरकार फेर्ने काममा काँग्रेस लागेको होइन । सरकारलाई सचेत मात्र गराएको हो । सरकारभित्रकै केही राजनीतिक दलले सरकारलाई असफल बनाउने खेलमा लागेका छन् । नेपाली काँग्रेसलाई सरकार भित्रभन्दा बाहिरै बसेरपनि काम गर्न सक्छ । यो सरकारले अहिलेसम्म आठ महिना वित्दापनि मधेसका मुद्धाहरु सम्बोधन गर्न सकेको छैन । मधेसी राजनीतिक दलका नेताले भन्छन्, हामीलाई बोलाउँछ चिया खुवाएर पठाउँछ यसरी राजनीतिक चल्दैन । संविधान आउनुभन्दा पहिल्लै मधेसीहरु आफ्नो मुद्धा लिएर आन्दोलनमा गएका थिए । त्यतिखेरै काँग्रेसले मधेस मुद्धालाई काँग्रेसले संविधानमा समेट्न खोजेको थियो तर एमालेले मानेन त्यसकारण संविधान जारीभएलगत्तै संशोधन विद्येयक काँग्रेसले हाल्यो । नागरिकता र जनङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तोक्ने जुन संसदबाट काँग्रेसले पारित गरायो ।
तपाईले मधेस आन्दोलनलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
मधेसी आन्दोलन भनेर जुन मधेसी राजनीतिक दलले उठाएका छन् त्यीमध्ये केही मुद्धाहरु राम्रा छन् । पहिचान र अधिकार संविधानमै तोकिएको कारणले अधिकार र पहिचान सबैको सुनिश्चित हुनुपर्छ । उहाँहरुको जायज मागहरु सम्बोधन हुनुपर्छ । मधेसी पनि नेपाली जनता हुन् भन्ने भावनाका साथ वर्तमान सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ ।
मधेस आन्दोलन सफल होला त ?
मधेस आन्दोलन निश्चय नै सफल हुन्छ । यस अर्थमा की मधेस आन्दोलनमा बारेमा नेपाली काँग्रेसले अग्रसरता लिनुपर्छ । नेपाली काँग्रेसको मुख्य आधारभूमि भनेको मधेस हो । व्यवस्थापिका संसदमा होस् वा उच्चस्तररिय राजनीतिक बैठकमा होस् नेपाली काँग्रेसले मधेसका मुद्धाहरुलाई उठाउँदै आएको छ ।
संविधानमा मुस्लिम अधिकारको बारेमा सन्तुष्टि हुुनुुहुन्छ ?
मुस्लिम अधिकारको बारेमा भन्नुपर्दा मुस्लिम मुलुकमा ४.२० प्रतिशत छन् । पहिचान संविधानमै उल्लेख छ तर अधिकारका लागि पछाडि छन् । मुस्लिम हरेक क्षेत्रमा पछाडि छन् । जस्तै राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिकलगायत । मुलुकमा पछाडि परेका जातीलाई समान स्तरमा ल्याउनका लागि उनीहरुको सम्पूर्ण अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ । मुस्लिमको स्वायत्त क्षेत्र र निर्वाचन क्षेत्र आरक्षण हुनुपर्छ । स्थानीय निकायदेखि केन्द्रसम्म आरक्षण कोटा छुट्याउनुपर्दछ । जुन क्षेत्रमा मुस्लिमको बाहुल्यता कम छ त्यस क्षेत्रमा विशेषाधिकार दिनुपर्छ ।
सरकारले मनोमानी ढङ्गले राजदूत सिफारिस गरेको छ नी ?
अहिले जतिपनि देशमा सरकारले एकलौटी रुपमा राजदूत सिफारिस र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि गरेका छन् यो निश्चय पनि गलत कुरा हो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले एकजनामात्र भारतमा सिफारिस गरेको थियो यो नेकपा (एमाले)को पार्टीको व्याक्तिगत कारणले फिर्ता बोलाइयो यो गलत कुरा हो । राजदूत भनेको कुनै एक पार्टीको हुँदैन उ पुरै देशको जिम्मा लिएर गएको हुन्छ र दुई देशको कुटनैतिक सम्बन्धलाई सुमधुर र सुढृढ बनाउनका लागि पहल गरिरहेको हुन्छ । तर यो सरकारले भारतसँग मजबुद सम्बन्ध बनाउन नखोजेको देखिन्छ । जबकी एकातिर चीन छ भने अर्कोतिर भारत छ । भारतसँग हाम्रो राजनीतिक, सामाजिक पुरानो सम्बन्ध छ । हाम्रो भाषा, धर्म, संस्कृति चेलिबेटीको सम्बन्ध छ । भारतसँग हामी टाढा रहन सक्दैनौ ।
मुलुकमा ६५ वर्ष पुरानो नेपाली जनताको चाहना संघीय लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण भएको छ । यो नेपाली काँग्र्रेसको नेतृत्वमा भएको हो । अब यसलाई चाँडै कार्यान्वयन हुनुपर्छ र मधेसको समस्याको समाधान पनि हुनुपर्छ । त्यसपछि मात्र नेपाली जनतालाई शान्तिको अनुभूत हुन्छ र मुलुक विकासको बाटोमा अगाडि बढ्न सक्छ । धन्यवाद